WWE News: Ariel aka Shelly Martinez dia nanambara ny fikasana hisotro ronono - Wwe
WWE News: Ariel aka Shelly Martinez dia nanambara ny fikasana hisotro ronono
Ny superstar WWE sy TNA teo aloha, Shelly Martinez, dia nanambara ny fikasany hiala amin'ny tolona matihanina. I Martinez, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Ariel nandritra ny fihazakazahany WWE, dia niseho farany tamin'ny orinasa roa nandritra ny fisehoana Impact Wrestling tokana tamin'ny 2016.
Nandany roa taona monja tao amin'ny WWE i Martinez, izay nahitana ny fihenan'ny fotoana fivelarany. Taorian'ny volana maromaro nitsangantsangana tsy nisy tanjona tena izy dia niseho teo anilan'i Kevin Thorn i 'Ariel' nandritra ny lalao nataony. Ny fotoana lehibe indrindra nananany tao amin'ny orinasa dia rehefa nanampy ny The New Breed nandritra ny fahaverezan'ny ECW Originals tao WrestleMania 23 izy.
dragon ball super hitohy
Ny fon'ny raharaha
Ao amin'ity clip etsy ambony ity dia nilaza i Martinez fa mbola tsy nisotro ronono tamin'ny asa aman-draharaha izy, na izany aza taorian'ny famandrihana roa tsy miankina afaka manantona tsara ny baotiny. Nandinika tamin'ny antsipirihany momba ny taona lasa lasa izay izy, ankoatry ny nanonona ilay tranga malaza ratsy niaraka tamin'i Dave Batista izay heverina fa nahatonga azy hiala tao WWE nandritra izay taona lasa izay.
Mandritra ny volana vitsivitsy, hanohy hahita an'i Martinez manaparitaka ny asany amin'ny asany izahay, na izany aza, mbola tsy voamarina izay tiany hatao mandritra ny fotoana nanomezany azy. Taloha dia efa niaraka tamina tetikasa ivelany maromaro izy, saingy toa namela zavatra misokatra amin'ny fandikana azy izy izao.
Tsy dia fatiantoka lehibe ho an'ny tolona pro ny mahita an'i Ariel aka Shelly Martinez mandeha lavitra ny orinasa, saingy azo antoka fa nanana ny fotoanany izy tamin'ny WWE sy TNA.
Mahamenatra fa nifarana ny fotoana nijanonany tao amin'ny WWE noho ny fifanolanana tamin'i Batista, fa tsy ny tena mahavariana indrindra ny tantara raha dinihina ny sasany amin'ireo tantara momba ny The Animal tamin'ny taona lasa.
dragona baolina Super niverina
ohatrinona ny vidin'ny fehikibo wwe
inona no nanjo an'i dean ambrose
zavatra tokony hatao rehefa mpitovo ianao ary tsy manana namana
tsy fitoviana eo amin'ny fitiavana sy ny filan'ny nofo